UBobo ufisa ukuyogiya eMabhida – Maskandi Media
UBobo ufisa ukuyogiya eMabhida
Ebhala ekhasini lakhe kuma social media uthe, umculi osezingeni lakhe akumele ngabe ungomunye wabaculi ababanenkinga uma skumele ayojabulisa abantu.
“NGeke ngilwise muntu futhi ngeke ngakhalela muntu kodwa sonke siyazi ukuthi umculo wethu usulele ekuthenini uqashwa kangakanani. Yebo siyawafaka amacwecwe ethu ezitolo zomculo kodwa akusafani nakudala manje”.
“Ngikhumbula ngisahamba neBhova ibingekho lento yokuthi uzihambisele wena mculi umsebenzi wakho kubantu. Ubuqopha uqede ufake amacwecwe akho ezitolo bese kuba ukuthi bazothenga amakhasethe lawo ezitolo uthole imali kanjaloke”.
“Zishntshile manje izinto akusafani nasekuqaleni. Sekwande nemvimbi la esithola ukujabula khona nathi esikhipha kanye ngonyaka ngoba phela akufani ukuthengwa kwecd entsha nokuthengwa kwe-CD esindala noma esinonyaka iphumile”.
“Yingakho ngizikhalela kubahlei bemcimbi ukuthi bengangivaleli ngaphandle uma sebehlela ngoba ngiyazi abantu bayathokoza ngami, bayathanda ukungibona ngigiya phambi kwabo”.
UBobo usanda kukhala ngokuthi kwaba nomcimbi omkhulu ngakubo kodwa elakhe igama alivelanga emabhukwini angcwele. “Ngikubona konke, kodwa lokhu kokuvalelwa ngisho ngakini imbala akuhlali kahle ngoba siye sibone kwezinye izindawo kugijinyiswa noma kuqhakambiswa abaculi bendawo kuthiwa ibona abazonandisa”.
Previous Previous post: Akeneme ngokudayisa kweHlanganani
Next Next post: Bathokozile ngokuthengwa kwecwecwe labo